I-Apple ingeza imibala emisha ezintanjeni zayo ze-AirTag nakwezindandatho | Izindaba ze-IPhone
I-Apple ingeza imibala emisha ezintanjeni zayo nakwezinsimbi
U-Angel Gonzalez | 16/09/2021 22:00 | Izaziso, Imikhiqizo ye-Apple
Ama-AirTag abe ngumkhiqizo ngezifiso ngokugcwele sibonga inani lezintambo, elengayo nezesekeli ezitholakalayo. I-Apple yenza itholakale kumsebenzisi inqwaba yezinketho, imibala nemiklamo kanye nezinketho zokwenza ngokwezifiso ze-laser kumkhiqizo uqobo. Kodwa-ke, ezinye izinkampani nazo seziqale ukumaketha izesekeli zazo futhi zinika ama-AirTag ukuthinta okwehlukile. Ezinsukwini ezimbili ezedlule i-Apple keyword yenzeka nangemva kwayo kwakhiwa amabhande amasha we-Apple nemibala elengayo nemiklamo yama-AirTags, Sikukhombisa ngezansi.
Imibala eminingi namathuba wokwenza ngokwezifiso amabhande we-AirTag
I-Apple njengamanje inezinsiza ezahlukahlukene zokwenza ngezifiso ama-AirTag. Lokhu kufaka phakathi indandatho yokhiye wesikhumba, ibhande le-polyurethane, intambo yesikhumba, intelezi yesikhwama seHermès, indandatho yokhiye wesikhumba kaHermès kanye nomaki wemithwalo kaHermès. Zonke lezi zesekeli ziyatholakala ngenani elikhulu lemibala futhi zingathengwa nge Isitolo se-Apple Online noma esitolo sangempela ku-apula elikhulu.
Imizuzu ngemuva kokuqeda inkulumo eyisihluthulelo ngoSepthemba 14, I-Apple ithule buthule isigaba sayo sezinsiza ze-AirTag ngokungeza imibala emisha kulezi ezilengayo nezintambo. Phakathi kwabo singathola imibala ocher, phakathi kwamabili kanye ne-wisteria okhiye besikhumba.
I-Apple ikhipha isibuyekezo ku-AirTag, usunayo vele?
Kufakwe nemibala Igolide, iBleau Saphir, iJaune d'Or nePiment Izindandatho zesikhwama sesikhumba sikaHermès nendandatho yokhiye ibize ngo- € 299. Ngaphezu kwalokho, ithegi yemithwalo kaHermès ingeze umbala omusha Igolide. Isesekeli sokugcina sinenani elilingana nama-euro angama-449.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple ingeza imibala emisha ezintanjeni zayo nakwezinsimbi
I-Apple yethula amathuluzi amasha wonjiniyela ukukhuthaza izinhlelo zokusebenza
I-Podcast 13x04: I-Apple Keynote, i-ado eningi ngalutho.